Otu esi enweta ihe nrite nke solaris - 1z0821 & 1z0876 - IT Tech Tech
Ihe ngosi nke ọzụzụ
Ka ị na-achọ Asambodo Solaris, ọ dị mma iji tụlee ọdịdị nke usoro ihe omume a ga-enye, usoro nhazi agụmakwụkwọ atụmatụ nkwekọrịta, ihe dị mkpa na ihe mgbaru ọsọ ya. N'isiokwu a, anyị ga-ewere gander na otú Hadoop ọzụzụ nwere ike inyere gị aka inweta asambodo a. Usoro ahụ kwesịrị itinye ihe mgbaru ọsọ, dịka ọmụmaatụ, nghọta nke njedebe map na àgwà ya, na-emepụta echiche, ghọta na iji ya eme ihe mgbe nile - na-eme ka ọkụ na-agagharị ma na-agbanwe nsụgharị na-emekọ ihe, nkwekọrịta nke apache. Usoro a ga - enyere aka ịchọta ozi ọrụ ezi na akụkụ ya.
E nwere ụzọ ole na ole nke ịchọta ụzọ isi tụlee ịchọta ebe iji nweta ọzụzụ. Nke a dabere na oge ịnweta maka ịmụ ihe. Ọzụzụ ahụ kwesiri ikwe ka ọ bụrụ na ị na-agụ ihe na weebụ, nke dị nso ma nke onwe gị, ofufe onye nkụzi na ihe nkiri nkiri. Ngwurugwu ndị a na-edozi ka esi nri maka onye ọ bụla nwere ike ịchọrọ ọrụ ha ka ọ ka na-egwu egwu ọrụ ha. Otu ọnọdụ dị mma nke ịntanetị bụ na ị ga-abịarukwu ezinụlọ gị nso, nweta site na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ ọrụ gị, yana n'oge gị.
Hadoop ọzụzụ bụ ihe dị oké mkpa nye ndị chọrọ iji nweta akwụkwọ nchịkọta Solaris. Ọzụzụ ahụ zuru oke maka ndị na-ahụ maka data data, ọkachamara, na-enyocha onye nyocha ihe ọmụma, na-eme ka ndị isi na ndị nchịkwa nchịkwa mara. Ọ bụkwa otu zuru okè maka ndị mmadụ na-arụ ọrụ ma dị mkpa ka ha nwee ikike ma ọ bụ na a ga-edegharị ha
Enwere mmasi nke aptitudes na ihe omuma ihe omuma ma otu nkuku ma obu ndi ozo kwesiri inwe ndi nkuzi maara ihe ndi nwere ike idozi usoro obula maka nhazi. Ọsọ nke ịkwadebe ozi dị mkpa.
Ijikwa ozi bụ otu mpaghara rụrụ na PC. Ọchịchị na ọzụzụ na-enye onye nwere ikike nke ịchịkwa ozi na PC, ma nyere aka site n'ịgbanwe ozi ọjọọ n'ime ogwe osisi. Ị ga-enwetakwa ihe ọmụma n'ime PC na ndị ọzọ ederede nke usoro ahụ, ozi ntinye nke gụnyere ikike nke ozi nke bụ ọrụ dị mkpa nke chọrọ onye nwere nkà.
Ighakọ ihe niile ọnụ, otu chọrọ mmụta na nghọta nke ike na ijide ozi kọmputa. Ọzọkwa, Ọ na-enye ozi na mpaghara ọ bụla achọrọ maka ike ọrụ ala ahụ. Ị ga-achọpụta otu esi emepụta ozi ahụ, zipu, debe ma chekwaa ozi na ụzọ dị iche iche.
Ị ga-amụta Map dị ntakịrị, na-egbuke egbuke na ikike ya ma bulie ozi na-arụ ọrụ nke ezi na akụkụ ya. Nke a na-enye ikike ndị dị mkpa chọrọ iji ọsọ ọsọ kwụsị ịkwadebe. Ị ga-enweta site n'aka ndị ọkachamara nwere ozi dị mma ma na ụkpụrụ na ala na aptitudes ụwa.
Mmalite nwere ike na-agba ọsọ dị iche iche ngwa ngwa na ngwa ngwa na nwere chaatị. Ọ dị mma na mmemme mmemme ndị ọzọ, ya mere, na-eme ka mmemme dị mfe. Enwụrụ ọkụ nwere ike ịnọgide na-agba ọsọ naanị ma gụọ ozi ọ bụla dị ugbu a nwere ike ịbụ nnukwu ozi maọbụ obere. Isi nke kwadebere nwere ike iji akache-amalite. O nweghị ike ịṅụ mmiri. Ọ bụ ihe ịga nke ọma na onye maara ihe.
N'otu aka ahụ, a ga-egosi gị map nke ga-enyere gị aka ikewapụ ihe ọmụma dị oke mkpa na obere ego ma nweta ihe ọmụma maka iji. N'ebe ahụ, ị ​​ga-achọpụta banyere nduzi na nduzi na-erughị ebe a na-agbanwe ndokwa maka ozi gbanwere n'ime ụdị ozi ọzọ
Pig na-eji ederede ederede a maara dị ka Latin Pig, ọ na-arụkwa ọrụ. Ọ bụ ihe na-adịghị mma maka ala ịkọwa nnukwu nnakọta ihe ọmụma bụ apa anụ. Ahịhịa apache na-enyere aka na ederede ederede nke edere dị ka akụkụ nke apache Hadoop. Ikike dị na nke a ga-enye gị ike ịmepụta ihe dị iche iche na chaotic ngwa ngwa n'otu oge. Ị ga-achọ aptitudes coding aptitudes iji ya, ma ị ga-abụ ọkachamara na mmemme JAVA.
NDỊ na-ewere akụkụ dị ịrịba ama na nyocha nke Solaris. Ha nwere ngwá, mmemme na akụ ndị na-eme ka ikuku. Ha nwere nkà na itinye aka na mpaghara mmepe, nhazi nke ozi na ndokwa na ihe ọmụma zuru oke. Nkwenye Solaris nke ị na-achọsi ike bụ naanị speck. Ụzọ nke mmụta na-eme mgbanwe iji kwekọọ onye ọ bụla na-agbalị ime ihe efu ha.
A na-ahụ nkwado ahụ n'ebe niile n'ụwa niile. Nke a na-enye nnukwu ala n'ihi mgbanwe nke ọnọdụ ọrụ na nnukwu mmegharị ọrụ na ndokwa ọhụrụ. N'ụzọ dị otú a, a ga-atụkwasị isi na inwe ụzọ niile nwere ike isi zute nhọrọ na iji usoro ọrụ arụ ọrụ.